आक्रामक प्रचारसहित प्रजातान्त्रिक प्यानलले ल्यायो यस्तो प्रतिवद्धता
दाङ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको यही साउन ३१ गते हुने निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक व्यवसायी प्यानलले आक्रामक प्रचारसहित आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको छ । प्रजातान्त्रिक उद्योगी संघको तर्फबाट निर्माण गरिएको उक्त प्यानलले निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी रहँदा आफ्नो २० बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवद्धतापत्रमा व्यक्तिगतरुपमा बिना दर्ता
दाङ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा संयुक्त व्यावसायिक प्यानलको तर्फबाट १३ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । संघको यही साउन ३१ गते हुने १३ औं अधिवेशनका लागि १३ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबद्धता पत्रमा घोराहीलाई जिल्लाकै आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, व्यवसायीले भोग्दै आएको मिसम्याच र
अपराध रोक्न प्रहरीलाई जनताबाट के चाहिन्छ ? (हेर्नुहोस् बिस्तारमा)
दाङ । केही घटना वा अपराध भएमा हामीले तत्काल प्रहरीलाई सम्झिन्छौं र प्रहरीले सहयोग गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्छ । तर, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले आमजनता, सरोकारवालाबाट के चाहन्छ ? के आमनागरिकको सहयोगबिना प्रहरी संगठन एक्लैले अपराध अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुराउन र नियन्त्रण गर्न सक्छ ? यसको
अब शौचालयसहितको बसमा सरर राजधानी
दाङ । राजधानीको यात्रा तय गर्नुभएको छ ? अनि राजधानी पुग्दासम्म भनेको ठाउँमा गाडीचालकले गाडी नरोक्दा दिसापिसाव लागेको बेला कति सास्ती भोग्नुपर्छ है ? अब चिन्ता गर्नुपर्दैन र त्यस्तो सास्ती भोग्नु पनि पर्दैन । किनभने अब तपाईं चढेको बसमै दिसापिसावका लागि शौचालयको व्यवस्थासहितको यातायात सेवा सुरु हुँदैछ तपाईंकै शहर र
जिउँदो भएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५०० शुल्क
के के सुबिधा लिँदा कति लाग्छ शुल्क ?
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पनासहित महानगरपालिका छिरेका विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा करको दर तथा दायरा बढाएको छ । गत असार ३१ गते सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन– २०७४ मा महानगरबाट बिभिन्न सेवा लिएबापत चर्को सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।
दाडमै अक्सिजन उद्योग स्थापना : परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ
दाङ । सिकिस्त बिरामी हुँदा दिइने अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग दाङमै स्थापना भएको छ । विशेषतः राप्ती अञ्चल र आसपासका जिल्लाहरुलाई लक्ष्यित गरी स्थापना गरिएको दाङ अक्सिजन उद्योग प्रा.लि.ले भर्खरैदेखि परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ गरेको छ । तत्कालीन लक्ष्मीपुर– ६ मा करीव ५ करोडको लागतमा निर्माण भएको अक्सिजन उद्योगले यही चैत
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय मेला २०७३ को ७५ प्रतिशत तयारी पूरा
दाङ । दाङको तुलसीपुरमा सुरु हुन लागेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय व्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सव एवम् औद्योगिक कृषि मेला २०७३ को ७५ प्रतिशत तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सव सञ्चालन तयारीका विषयमा दाङका सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरु एवम् पत्रकारहरुसँग आज गरिएको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मूल आयोजक समितिका संयोजक एवम् तुलसीपुर
दाङका युवा ब्यवसायी राना मुलुककै उत्कृष्ट
दाङ । दाङका युवा ब्यवसायी राजभक्त राना डिसहोमको उत्कृष्ट डिष्ट्रिब्युटर भएका छन् । राप्ती अञ्चलका पाँचै जिल्लामा डिसहोमको राम्रो बिक्री गरेको भन्दै डिसहोमको आधिकारिक विक्रेता डिस मिडिया नेटवर्कले उत्कृष्ट डिष्ट्रिब्युटर्स अवार्डबाट ब्यवसायी रानालाई पुरस्कृत गरेको हो । डिसहोमले राजधानीमा आयोजना गरेको भव्य कार्यक्रममा उनलाई प्रमाणपत्र, ट्रफी र मेडलले पुरस्कृत गरेको
सिटिजन्स बैंकद्वारा बाल विकास समाजलाई पचास हजार सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बाल विकास समाजलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको लागि ५० हजार सहयोग गरेको छ । बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमंग शर्माले सो चेक बाल विकास समाजका महासचिव सुभास गौतमलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले यसअघि पनि राष्ट्रिय व्याडमिन्टन खेलाडी सुश्री नङसल तामाङलाई
व्यापार संगठनको अध्यक्षमा डिल्लीबहादुर वली
दाङ । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनको तुलसीपुरमा सम्पन्न नगर एकता भेलाले डिल्लीबहादुर वलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा बीबहादुर वली, अलबहादुर बाठा र शेरबहादुर परियार रहेका छन् । त्यसैगरी सचिव वेदप्रसाद वली, कोषाध्यक्ष केशर वली, सहसचिव कुमार वली र सह कोषाध्यक्ष शारदा वली
नयाँ व्यवस्थापनका साथ ग्लोवल लुजा मनटावरमा
दाङ । घोराहीको तुलसीपुर चोकमा रहेको व्यापारिक भवन मन टावरमा सञ्चालन गरिएको ग्लोवल लुजा मेकअप स्टुडियोको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ । उक्त स्टुडियोको उद्घाटन उद्योग वाणिज्य संघ दाङका कोषाध्यक्ष मञ्जु बज्राचार्यले गरेकी हुन् । सो कार्यक्रममा ग्लोवल लुजा मेकअप स्टुडियोका सञ्चालक विनोद शर्माले सबैलाई स्वागत गरेका थिए । स्वास्थ्य र